Maalinta xuquuqda Aadanaha ee aduunka oo laga xusey deeganada Puntland. – Radio Daljir
Maalinta xuquuqda Aadanaha ee aduunka oo laga xusey deeganada Puntland.
Garoowe, Dec, 10 – Maanta waxaa laga xusey magaalada Garowe ee caasumada dawladda Puntland maalinta xuquuqda Aadanaha ee 10 December,waxaana meelaha xuskan lagu qabtay ka mid ahaa xarunta wasaarada haweenka iyo arimaha qoyska Puntland ee magaalada Garowe.
Munaasabadda ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo la xiriira wax ka qabashada xuquuqda Aadanaha ee dagaanada Puntland, waxaana diiradda loogu saaray tacadiyada ay la kulmaan haweenku iyo waxa ay dawladdu ka qabatay.
Waxaa kasoo qeyb galay qaar kamid golaha wasiirada dowlada Puntland iyo marwada Madaxweynaha dawladda Puntland.
Markii uu soo dhamaaday kulankii xarunta wasaarada lagu qabtay ayaa dhalinyarada iyo dadkii ka qeyb galayay ay socod ku mareen wadooyinka waa weyn ee Garowe.
Marwo Caasho Geele Diiriye wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo munaaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in munaasabada si isku mida looga xusaayo dhamaan 8 Gobol ee Dowlada Puntland ay ka kooban tahay.
Caasho Geele Diiriye wasiirka haweenka iyo hormarinta arimaha qoyska ayaa sheegtay in ay jiraan qaar kamid culumada oo aad wasaarada ula shaqeeya taasna ay dhiiro galin u tahay joojinta barnamijka fudniinka ee ah caada laga gudbay.
C/qaadir Yusuf Dahir agaasimaha guud ee wasaarada haweenka hormarinta arimaha qoyska ayaa sheegay in gudniinka fircoonigaa uu yahay mid xad gudub ku ah hablaha ayna wasaaradu taagerayso go’aankii xukuumada ee joojinta fudniinka.
Bashiir Axmed Cabdi